Ogaden News Agency (ONA) – Shir balaadhan oo lagu taageeryayo Jabhadaha dhawaan ku midoobay PAFD laguna qabtay Greater Manchester UK.
Shir balaadhan oo lagu taageeryayo Jabhadaha dhawaan ku midoobay PAFD laguna qabtay Greater Manchester UK.
Posted by ONA Admin	/ May 1, 2016
Waxaa maalintii shalay ahayd oo ay taariikhdu ku beegneed 30/04/2016 Isugu yimid shir balaadhan oo si heer sare ah loosoo abaabulay Jaaliyada Somalida Ogadenia ee Greater Manchester iyo Jaaliyada Oramia.
Shirkan oo ay Jaaliyaadka Ogadenya iyo Oromiya ay ku taageerayeen Isbahaysiga Jabhadaha Xoriyadoonka ah ee uu shirwaynahoodii koobaad lagu qabtay magaalada Asmara ee dalka Eritea ayaa waxaa ka soo qayb galay masuuliyiin labada Qoomiyadood ka kala socday, dadwayne aad ubadan oo kakala socday labada Jaaliyadood iyo marti sharaf lagu marti qaaday.
Kulankan ayaa waxaa khudbado kala wudan ka soo jeediyay Mudane Mahamed Ali iyo Mudane Saalah Siraaje oo kakala socday labada qoomiyadood, waxaa sidoo kale warbixino kala Duwan ka soo jeediyay madaxda Jaaliyadaha Oramia iyo Ogadenya. sidoo kale waxaa hadalo mihiim ah oo tilmaamayay iskaashiga iyo in la adkeeyo midnimada iyo wada jirka, ka soo jeediyay wax garadka iyo Aqoonyahanada labada dhinac ee shirka kasoo qayb galay.
Shirkan ayaa waxaa saldhig u ahaa Taageerada Isbahaysiga PAFD iyo iskaashiga labada qoomiyadood ee xornimadoonka. Shirka ayaa lagu adkeeyay in meel looga soo wada jeedsado gumaysiga doolka ah ee Xukuumada wayaanaha. Ugu danbayntii shirkan ayaa ku soo gabagaboobay jawi farxadeed iyo guul.
ONA Greater Manchester